Qiimaynta Heerka Fasalka
Xanaanada : Benchmark, FastBridge
Fasalka 1 : Benchmark, FastBridge
Fasalka 2 : Benchmark, FastBridge
Fasalka 3 : Benchmark, FastBridge, CoGAT 7, MCA
Fasalka 4 : Benchmark, FastBridge, MCA, NWEA
Fasalka 5 : Benchmark, FastBridge, MCA, NWEA
ACCESS iyo Alternate ACCESS ee Bartayaasha Luqadda Ingiriisiga (ELLs) waa qiimeyn lagu sameeyo barteyaasha Ingiriisiga si loo cabiro horumarka laga gaarey la kulanka heerarka Minnesota ee horumarinta luqadda Ingiriisiga. Inta badan bartayaasha Ingiriisiga waxay qaadan doonaan ACCESS ee ELLs, laakiin bartayaasha Ingiriisiga ah ee helay adeegyada waxbarashada gaarka ah lana kulmay tilmaamaha kaqeybgalka waxay qaadan karaan Alternate ACCESS ee ELLs.
Imtixaannada maadada waxaa loo geyn doonaa ardayda K-12 sida loo qorsheeyay iyada oo loo marayo macallinkooda Barashada Luqadda Ingiriisiga. Imtixaanada ardayga si gooni ah ayaa loo qorsheeyay. Jadwalka gaarka ah iyo jadwalka dhismaha ee dhismaha ayaa la wadaagi doonaa markay diyaar noqdaan.
Nidaamka Qiimeynta Benchmark
Benchmark waa qiimeyn lagu sameeyo akhriska hore iyo xirfadaha xisaabta, taas oo ugu horreyn la siiyo ardaydayada hoose si ay ula socdaan horumarka xagga guusha akhriska iyo hanashada xirfadaha xisaabta. Imtixaanka waxaa la siiyaa deyrta iyo guga ardayda dhigata fasalada K-6.
Natiijooyinka waxaa isla markiiba heli kara macallimiinta. Xogta waxaa lala wadaagayaa ardayda iyo qoysaska shirarka.
Tijaabada Awooda Garashada (CoGAT 7)
Imtixaanka CoGAT waxaa la siiyaa dhammaan ardayda Fasalka 3 -aad mid walba oo dayr ahaan loo aqoonsado adeegyada Hibada iyo Kartida. Waxaa ka sii muhiimsan, waxaa loo isticmaalaa in lagu garto awooda ardayda oo dhan kuwaas oo aan had iyo jeer lagu muujin imtixaanada kale ee guusha. CoGat waxay qiimeysaa kartida ardayda ee sababaynta iyo xallinta dhibaatooyinka iyadoo la adeegsanayo calaamadaha hadalka, tirooyinka, iyo kuwa aan afka ahayn (meelaha). Dhibcaha waxaa lala wadaagaa qoysaska horaantii Diseembar waxaana laga heli karaa PowerSchool iyo Iftiimin.
FastBridge (Nidaamka Qiimaynta Qaabdhismeedka Macallimiinta)
FastBridge waa qiimeyn baaris ah oo loogu talagalay akhriska hore iyo xirfadaha xisaabta, taas oo ugu horreyn la siiyo ardaydayada hoose si ay ula socdaan horumarka xagga guusha akhriska iyo hanashada xirfadaha xisaabta.
Natiijooyinka waxaa isla markiiba heli kara macallimiinta Fastbridge iyo Iftiimiya; Xogta waxaa lala wadaagaa ardayda iyo qoysaska iyada oo loo sii marayo xariirka PowerSchool iyo shirarka kadib daaqada imtixaanka.
Qiimaynta Guud ee Minnesota (MCA) iyo Imtixaanka Minnesota ee Xirfadaha Tacliinta (MTAS)
MCA-yada waxaa amar ka haysta gobolka Minnesota. Waxay ka caawiyaan dugsiyada iyo degmooyinku inay cabiraan horumarka ardayga ee heerarka tacliimeed ee gobolka. Imtixaannada xisaabta iyo akhriska waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasallada 3-5 iyo sayniska waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasallada 3 iyo 5.
Dhibcaha hordhaca ah ee ay heli karaan dugsiyadu dhammaadka Maajo; Warbixinnada Shakhsi ahaaneed ee Ugu Dambeeya waxaa la siiyaa dugsiyada si loo siiyo qoysaska deyrta sanadka soo socda.
Kala duwanaanshaha imtixaankan gobolka, oo loo yaqaan MTAS ama Minnesota Imtixaanka Xirfadaha Tacliinta, ayaa si shaqsi ah loogu qaadaa ardayda leh naafonimada xagga garashada ugu weyn.
Qiyaasaha NWEA ee Horumarka Tacliinta
Imtixaanada Ururka Northwest Evaluation Association (NWEA) waxay go'aamiyaan heerka waxbarida cunugaaga waxayna cabiraan kobaca tacliinta sanadba sanadka ka dambeeya xisaabta, akhriska iyo sayniska. Waa imtixaano la qabsi ah (soo bandhigaya su'aalo aad u dhib badan sida ilmuhu ugu jawaabo si sax ah) oo tilmaamaysa heerka waxbarasho ee arday kasta. Imtixaanka waxaa la siiyaa ardayda dhigata fasallada 4aad iyo 5aad xilliga dayrta iyo guga.
Natiijooyinka qiimeynta waxaa isla markiiba heli kara macallimiinta NWEA. Xogta waxaa lala wadaagayaa ardayda iyo qoysaska shirarka iyo / ama boostada bil gudaheed imtixaanka.